Tababaraha Liverpool oo qaadanaya goolhaye hore
Sunday October 11, 2020 - 18:08:17 in Wararka by Mogadishu Times
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa loogu baaqay inuu lasoo saxiixdo xiddigii hore ee diirada u saarnaa Arsenal David Raya ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga gudaha England. Liverpool ayaa la rumeysan yahay inay ugaarsi ugu jirto sidii a
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa loogu baaqay inuu lasoo saxiixdo xiddigii hore ee diirada u saarnaa Arsenal David Raya ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga gudaha England. Liverpool ayaa la rumeysan yahay inay ugaarsi ugu jirto sidii ay dib ugu heli laheyd Alisson Becker.
Liverpool ayaa haysata kaliya 6 maalmood oo ay ku soo qaadan karto goolhaye cusub hadii ay doonayso badalka Adrian.
Ciyaaryahanka reer Spain ayaa u adkeystay ciyaar adag oo ay la ciyaareen Aston Villa isbuucii hore, isagoo laga dhaliyay 7 gool guuldaradii 7-2 ee ka soo gaartay kooxda hoose ee Villa.
Reds waxaa ka maqnaa Alisson dhaawac ka soo gaaray tababarka awgiis, waxa uu seegi doonaa ilaa lix todobaad garoomada taas oo la macno ah in Liverpool ay wajihi doonto kulamo muhiim ah iyada oo aan heysan goolhayaha dooqa koowaad.
Wararka la isla dhexmarayo ayaa sheegaya in Reds ay dhex dhexaad ka noqon karto suuqa kala iibsiga gudaha si ay u keensato keyd ka raqiisisan Alisson, iyadoo Jack Butland uu bartilmaameed u yahay.
Si kastaba ha ahaatee, weeraryahankii hore ee Tottenham Darren Bent ayaa aaminsan in kooxda heysata horyaalka ay tahay inay lasoo saxiixato xiddigii hore diirada ugu saarnaa Arsenal David Raya, kaasoo lala xiriirinayay inuu ka tagayo Brentford kuna sii jeedo Emirates horaantii daaqada.